देशी चश्मा – Purna Oli
Lyricist | Writer
August 12, 2016 August 14, 2016 Purna Oli0Comments
“ए कविराम कति ढिला गरिरा ? मैले चारचारवटा तन्नाहरु धोइसक्दा पनि जाबो दुइटा सिरानीको खोल धुन पनि दिनै फाल्छ, बजिया । … छाड् ! यीः यसरी धो न ! दुइटा त खोल नै धुन नै बाँकी छ । अलि छिटो गर् । कपडा सुकेन भने भोलि यस्तै चीसो रेतमा सुताउँछस् नयाँ दुलहीसाबलाई ?”
“बाबा हो ! कति गन्हाको ? राम्रो ओडुनिल पनि पाइँदैन यो बजारमा ? यसलाई प्यान घोट्न पनि आउँदैन, छाड् मै घोट्छु । यी‍‍‍.. यता राख् सनीफ्रेस । एउटैले प्रयोग गर्ने भाँडो पनि कति फोहर बनाको होला । यति त दिनदिनै आफै सफा गर्नुपर्छ नि । पानी अलि धेरै राख्, त्यो कुनाकानी कतै बाँकी नराखी पानीले सफा गर् । फिनेल यी यता छर्के आइज । खोपाखोपामा कपुर राख ।”
“ए बलबहादुर ! कुर्सी सोफा सबै मिलायौ ? राम्रो खालको कलम नोटबुक टेबुलमै राखिदेऊ । टेबुल पोश कुर्सीको रुमाल पनि फेरिहाल । फर्निचरहरु सबै घोट्न लगाएर चिटिक्क पारी राख । मान्छे नै हिरो छन् रे । देशी चश्मा लाउँदा त सेम सलमान खान जस्तै रे । फोनमा बोल्दा पनि अंग्रेजी र हिन्दी नघुसाई बोल्दै नबोल्ने । धेरै शब्द त मरिगए बुझ्दै नबुझिने । अँ फाइलहरु सप्पै मिलाएर राख है । जे खोजे पनि टक्क भेटिने हुनुपर्छ । प्रगति विवरण तयार पार्यौ ? यो वर्षभरिकै तयार पार्नु । ब्रिफिङ गर्नुपर्छ सबै ।”
“अनि सुन, नदिराम, खाद्यबाट अलि राम्रो चामल, दाल हप्तादिनलाई पुग्नेगरी ल्याइराख । तरकारी ताजाताजा ल्याउनु, दिनदिनै सखारै उठेर मैले भनिराख्नु नपरोस् । राम्रो दूध ल्याउने मान्छेलाई आजै सम्पर्क गरी हाल । एकदिन बिराई माछामासु चाहिन्छ रे । सानीभेरीका माछा दिनहुँ पाइहालिन्छ, बरु लोकल भालेहरु खोज्नू विदाको दिनमा ।”
“ए सान्नानी मालाहरु उइनियौ ? कतिवटा पुग्यो ? १५-२० वटा उइनिनु पर्छ । सबैलाई पुग्दैन फेरि । चाँफासम्म हामी पनि जाने भनी १२ जना हाकिमहरुले नाम टिपाइसके । त्यही कोच्चेर गए यो गाडीमा त बढीमा दशजना हो । अँ कृष्ण, गाडी ठीक कन्डिसनमा त छ नि ? सफा गरी राख । सुन त कृष्ण, शिक्षाको गाडी पनि भन्नुपर्छ, मलाई सम्झाउनू एकछिनपछि । अँ सान्नानी, बगैँचाका सबै फूलहरु स्वाहा नपार्नु नि फेरि । कृषि फाराममा खानेपानी अफिसमा पनि भन्द्या छ । त्यताबाट ल्याएर काम चलाउनुपर्छ । बारीका फूल नामेट पार्ने होइन ।”
“कत्ति न जान्ने हुनुपर्ने भाको होला यो सुब्बा दाजुलाई पनि ! आखिर छोडेर जाँदा सबैको एक न एक लात खाएकै छ लात न खाएपनि ल्वाप्पा ख्वाइमागेकै छ ।” छेड हानी सान्नानीले ।
यसरी दिनभर दौडधुप र छटपट गरिराख्यो जिविसको पुरानो सुब्बा केशवबहादुरले ।
खानाखाइवरी ओछ्यानमा पल्टेको चार घण्टा भइसक्यो, पटक्कै निद्रा आएको छैन ।
‘हुँदैन, हुँदैन ! मैले आफूलाई अझै सम्हाल्नुपर्छ । मैले गुमाउनुसम्म गुमाइसकेँ । अब पनि गुमाउने भूल गर्नु हुँदैन । आफ्नै परिस्थितिलाई जसरीतसरी अरु अनुकुल बनाउँदै जानुपर्छ ।’
‘के गर्ने चित्त बुझ्दैन, बोलिहालिन्छ । गर्नेहरुले पनि अति गर्छन् । न परिस्थितिको विश्लेषण गर्छन्, न सामान्यीकरण गर्न नै खोज्छन् । बोल्न बाध्य नै पार्छन् भन्या ! तिनीहरु हात धोएर मेरो पछि लागेकोलागेइ गर्ने ! मैले मात्र कति आफूलाई सम्हाल्ने ?’
‘तिनीहरुकै जस्तै मैले पनि हात धोएर तिनीहरुको पछि लागेको भए के के हुन्थ्यो के के ! जे पनि हुन सक्थ्यो । हो नि, जे पनि हुन सक्थ्यो ! आफ्नो त गुमाउने भन्नु नै के छ र !’
‘होइन, होइन । मेरा यी २० वर्ष तनावै तनावमा बिते । मेरो पनि क्यारियर छ । अब यसो गर्नुहुँदैन । नयाँ आउने हाकिमसाबसंग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ मैले । जसरीतसरी पनि । एउटा हाकिमलाई मात्र खुशी तुल्याउन सकेँ भने पनि मेरो क्यारियर उज्यालिँदै जानेछ । अझै १५ वर्ष बाँकी छ जागिर खान । १५ वर्षभित्रमा मैले पनि यी हाकिम भनाउँदालाई रिझाएँ भने एउटा फुली त कसो नपाइएला र ! अरुले पुरस्कार थापेका थापेइ छन्, त्यत्रो विधि संख्यामा आफ्नो नाम कहिल्यै परेन !’
‘मैले कसको के बिगारेको छु र ? अहिलेसम्म, भन्ने हो भने, यो अफिस मैले नै धानेको हुँ । बाहिर जिल्लाका हाकिमहरु आउँछन् । आधा समय बुझ्नमै जान्छ, रमाइलो गर्छन्, रल्लिन्छन्, निस्कने समय नजिकिँदै गए निहुँ खोज्न थाल्छन्, अनि जान्छन् । जाँदाजाँदै ‘यसैले गर्दा काम गर्न नदिएर हो’ भनेर मलाई नै आरोप लगाउँछन् ।’
मनकुरा खेलाइराख्यो केशवबहादुरले । अँहँ निद्राले पटक्कै छोएन ।
“ए नदीराम, नदीराम ! नदीराम !! बेडरुममा पानी नै राखेको रहेनछ बजियाले । कति छिटो मस्त निद्रामा पर्छन् यिनीहरु ? भोलि पनि यसै गर्ला यो बजियाले ।” उठेर भान्सामा गई घट्लक घट्लक एकजग पानी रित्त्याउँछ र एकजग पानी गाग्रीबाट सारेर कोठामा ल्याई राख्छ । सिरानीमुनि राखेको आजै गर्नुपर्ने भनी टिपेको नोट सर्सर्ती जाँच्छ ।
‘भोलि कति बजे हिँड्ने हुन् ? ८/१० कल फोन नै रिसिभ गरेनन् । अस्तिसम्म त राम्रै कुरा भएको थियो । यताको बारे सब सोधेका थिए, कर्मचारीको बारेमा, राजनीतिको बारेमा, विकासको बारेमा, ठेकेदारको बारेमा, अनि पर्यटकीय स्थलहरुको बारेमा । खुब जिज्ञासा रहेछ हाकिमलाई । बोलीबाट त मान्छे मिलनसार जस्तै लाग्छन्, व्यवहार कस्तो छ पो अब ! आफू भलो त जगतै भलो ! अब आफैले राम्रो गर्नुपर्छ । त्यसदिनदेखि फोन नै उठेको छैन । जिल्लाका ठूलो हाकिम भएकोले फोन नै तीन चारवटा होलान् । उनका मान्छेहरुसंग फोन गर्दै फुर्सद छैन होला बरा ! मैले केही शंका गर्नुहुँदैन । मैले आफूलाई सकेसम्म सम्हाल्नुपर्छ ।’
‘कुखुरी काँ !’ ‘कुखुरी काँ !!’ भाले तर्रातर बास्न थाले । ‌
‘ओहो रात त गइसकेछन् त ! अब त के निदाउनू ? भोलि निदाउँला आनन्दसंग ।’
केशव उठेर अफिसको गेट पर्खाल सबैतिर हेर्दै गयो । अझै अँध्यारै भएकोले सेता कागज बाहेक अरु केही देख्नसकेन । देखिएका जति कागजपत्र टिप्दै डस्टबिनमा राख्नथाल्यो ।
उता घण्टी टङटङटङटङ टिनिनिनिन बज्न थाल्यो ।
“को आउँछन् बिहानै यो मन्दिरमा पुजा गर्न ?” ऊ मन्दिरतिर हेर्न गयो ।
घण्टी बजिरहेकै थियो ।
‘हत्तेरी, मेरो सुद्धि ! हुँदाहुँदा फोन र मन्दिरको घण्टीको स्वर पनि नछुट्याउने भइएछ ! फोनको घण्टी पो बजेको रहेछ । तर यति बिहानै ?’
ऊ कुद्दै कोठामा पुग्यो । हस्याङफस्याङ गर्दै फोन रिसिभ गर्यो ।
“म हाकिमको डाइबर बोल्या, किन फोन नै उठाउनुभएन त सुब्बासाब् ? हामी यताबाट हिडिसक्यौँ, त्यै जानकारी दिनलाई गर्‍या ।” उताबाट फोन काटियो । उसले यताको फोन जाँच्यो । दुईकल मिसकल आएको देख्यो । एक कल हाकिमकै मोबाइलबाट आएको रहेछ ! उसले हाकिमको फोनमा लगायो । फोन उठेन । डाइबरको फोन लगायो । फोन उठेन ।
गाडी चलाइरहेको डाइबरलाई फोन गर्नुहुँदैन । गाडीको आवाजले केही सुनिएको छैन होला, त्यै भएर हाकिमको फोन नउठेको होला ।
अनि झटपट जिल्लाका हाकिमसाबहरुलाई फोन लगाउन थाल्यो, “दाङबाट हाकिमसाब बाटा लागिसक्नुभो रे ! तयार हुँदै गर्नुपर्ला । चारबजे हिडेको गाडी दश नबज्दै आइपुग्छ । आठबजेभित्रै जिविसमै उपस्थित हुनुहोला ।”
“दाङबाट हाकिमसाब बाटा लागिसक्नुभो रे ! तयार हुँदै गर्नुपर्ला । चारबजे हिडेको गाडी दश नबज्दै आइपुग्छ । आठबजेभित्रै जिविसमै उपस्थित हुनुहोला । गाडी छुटेमा मलाई केही नभन्नुहोला फेरि ।”
सबभन्दा पहिले इन्स्पेक्टर साब आइपुगे । उनले खादाको व्यवस्था भए नभएको बारेमा सोधेपछि सुब्बासाब हतारिए, “ए नदीराम, बजारमा गएर सोधिहेर त । सुन त तिमी त्यतैबाट बजारको पूर्वपट्टि निस्कनू । गाडी त्यहीँ आइपुग्छ ।” उसले टाउको कन्याएपछि आफ्नो पाकेटको एउटा हात्ती तानेर दिए । त्यसपछि मालाहरु चेक गरे । अबिर चेक गरे । शिक्षाको गाडी आइनपुगेकोले जिशिअ साबलाई फोन लगाएर तुरुन्त गाडी पठाइदिन अनुरोध गरे । साढे सात नबज्दै जिल्लाका प्रायः सबै हाकिमसाबहरु आइपुगे जिविसको प्राङ्गणमा । नागरिक समाजका प्रतिनिधि, बजार प्रतिनिधि, केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि आइपुगे ।
“नयाँ योजना हाकिम साब् धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ रे ।” “केको योजना हाकिम साब भनिराको, उहाँ त एलडिओ नै हो नि” “अलि कडा मिजासका पो पनि हुनुहुन्छ रे ।” “होइन, होइन निकै मिलनसार हुनुहुन्छ रे ।” “कामू एलडिओको जिम्मेवारी पाउनुभएर आउँदैहुनुहुन्छ रे ।” “कहाँ हुनु ! निमित्त मात्र हो रे, निमित्त भए त योजना साब् नै भन्नुपर्‍यो नि ।” “जे भएपनि हिरो, लक्का जवान रे ।” “कालो देशी चश्मा लाउने रे ।’ “चश्मा लाएको बखत त सेम सलमान खानजस्तै रे ।” “हा हा हा हा” “हा हा हा हा ।” हाँसोले जिविस धेरै दिनपछि फेरि बेसरी गुञ्जायमान भयो ।
“तयारी पूरा भयो हैन त ?”
“भयो, भयो ।”
“ल, अब हिँडिहाल्नुपर्छ, गफ उतै गएर गरौँला । बरु कहाँसम्म जाने ? शितलपोखरीसम्म ?”
“हैन, चाँफा अलि फराकिलो ठाउँ छ । तरकारी फाराम पनि देखाउन पाइन्छ । तरकारीका हाकिमहरु उतै हुनुहुन्छ ।”
“हैन कोटसम्म पुग्नुपर्छ । तलसम्मको बाटो र वारिपारि सबै देखिन्छ ।”
“ल, ल जाऊँ, जहाँ भेट हुन्छ त्यहीँसम्म जाम् । सबैको सल्लाह मिलेपछि गाडी स्टार्ट भयो । त्यतिकै बेला नदीरामको फोन आयो, “खादा त पाइयो, कतिवटा ल्याम् हजुर ?” “अँ कति भन्ने अब, हात्तीको जति आउँछ त्यति नै ल्याऊ, छिटो आइहाल ।”
शिक्षाको गाडी पनि आइपुग्यो । उपस्थित सबै ठेल्लमठेल गरेर गाडी चढे ।
“ए सुब्बासाब, तपाईँ मुख्य स्वागतकार हो, यता आउनुस् ।” इन्स्पेक्टरसाबले केशवलाई सोधे, “अनि हाकिमसाबलाई गाडी किन नपठाइदिएको ?”
“उहाँले आफ्नै गाडी छ भन्नुभयो, पठाउनुपर्दैन भन्नुभो हजुर, मैले त पठाइदिने नै भनेको हुँ ।”
“ए, ल भैगो ।” दुवै गाडी ओरालो झर्न थाले ।
सोलाबाङ चौकीले योजना हाकिमसाबको गाडी आइपुगेको खबर इन्स्पेक्टरसाबलाई गर्‍यो ।
“ल, हामी शितलपोखरीसम्म मात्र पुग्ने भयौँ । बाटो राम्रै छ । चार घण्टामै आइपुग्नुभएछ ।”
गाडी शितलपोखरी पुग्नेबित्तिकै हाकिमसाबहरु गाडीबाट ओर्लनथाले । पुग्नेजतिलाई केशवले माला बाँड्यो । अनि, ल्याएको जति खादा पनि बाँड्यो । दुइटामाला र दुइटा खादा आफ्नो लागि छुट्टै राख्यो । अनि अबिर खोज्न थाल्यो । अबिर सिटको चारैतिर । माला राखेको ठाउँनिर जताकतै खोज्यो । कतै फेला परेन ।
यता केशवले धुइँधुइँति अबिर खोज्दै थियो, उता नयाँ हाकिमसाबको गाडी आइपुग्यो । सबै हाकिमसाबहरु तँछाडमछाड गर्दै त्यतैतिर लागे । गाडीबाट सलक्क परेको अग्लो व्यक्तित्व अदबसाथ तल ओर्लियो । सफेद पोशाकमा कालो चश्मा अत्यन्तै म्याच गरेको थियो । केशव त हेरेको हेर्‍यै भयो । अरुले माला लगाइदिनथाल्दा ऊ झल्यास्स भएर फेरि अबीरको प्याकेट खोज्न थाल्यो । भेटिएन ।
‘भो छाडिदे अबिरसबिर । माला र खादा मात्र भए पनि बेलैमा लगाइदिनुपर्छ’ भन्दै माला खोज्न थाल्यो । माला पनि अरुले नै लगिसकेछन् । अब परेन बित्यास ! अब त्यत्तिकै भए पनि आफ्नो परिचय दिन उपयुक्त ठानी अरुलाई पछाडि तान्दै केशव असिनपसिन हुँदै नयाँ हाकिमसाबको अगाडि पुग्यो र दुवै हातले नमस्कार टक्र्याउँदै परिचय दियो, “हजुर म निमित्त सुब्बा, हजुर म केशव । हजुरलाई स्वागत छ यो जिल्लामा ।” अनि पुलुक्क हेर्‍यो हाकिमसाबको नजरतिर । कालो चश्माले आफूलाई हेरेको हो कि अरुलाई नि केही खुट्ट्याउन सकेन । आगन्तुक हाकिमसाब केही नबोली आफ्नो गाडीमा चढे, उनको गाडी अघि लाग्यो, अरुहरु फटाफट सबै सदरमुकामबाटै आएका दुई गाडीमा साविकझैँ ठेलमठेल गरेर दुई गाडीमा भरिए र नयाँ हाकिमकै पछि लागे ।
बाटोभरि केशवलाई थक्कथक्क लागिरह्‍यो, ‘होइन, कहाँ हरायो होला त अबिरको बट्टा ? मैले अबिर नखोजेर, शुरुमै माला लगाइदिन गइहाल्नुपर्ने ! के भन्ठाने होलान् नयाँ हाकिमले ? मनमा लिए कि ? आ… लिएनन् होला ।… अति शंका उब्जन्छ के मेरो मनमा पनि ।… यस्तो भयो भनी सफाइ पेश गरिहाल्छु नि !… आखिर अब कम्तीमा दुई वर्ष संगै बसिने हो क्यारे । मनमा लिने मान्छे होइनन् जस्ता छन् ।’
दुवैतिर सुन्दर रुपमा सजाइएका कलश तुल्य तामाका ठूलाठूला भाँडाहरुलाई राखिएको गेटलाई पछि पार्दै गाडी भित्र छिर्‍यो र जिविसको प्राङ्गणमा गएर रोकियो । अरु गाडी पनि संगसंगै प्रवेश गरे । केशवले अह्राएअनुसार सबै कर्मचारीहरु आठबजे नै अफिसमा आइपुगेका थिए र चासो लिने अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरु र सरोकारवालाहरु पनि आइपुगेका थिए । दुलहीझैँ सजाइएको कार्यालयमा सबैले लामवद्ध भएर नयाँ हाकिमको भव्य स्वागत गरे ।
कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछि सजाइएको कुर्सीमा विराजमान हुँदै हाकिमसाबले सबैको परिचय मागे । परिचयको क्रममा पनि केशवको पालो पुछारतिरै आयो । आफ्नो अलिकति लामो परिचय दिन खोजेकै हुन्, तर हाकिमले ‘अहिले पर्दैन !’ भनेपछि छोटो परिचयमै रोकिनुपर्‍यो । हाकिमको बोल्ने पालो आएपछि उनले धेरै जिल्लामा जिविस प्रशासन लगायतका कार्यालयको हाकिमी चलाइसकेको र जताकतै सफल भएको बताए । आफूलाई कार्यालय सञ्चालन लगायत विकास कार्यलाई सफल पार्न कर्मचारी राजनीतिज्ञ स्थानीय विद्वान सबैको सहयोग चाहिने बताए । केशव सुब्बाका त खुशीले गदगद हुँदा आँखाबाट आँशु नै झरेछन् । पछाडि फर्केर आँशु पुछे, अनि मनमनै भने, ‘हाकिम भनेको यस्तो हुनुपर्छ, सबैको मन जित्ने । अब यो सुब्बाका पनि दिन फिरे जस्तो छ ।’
जिल्लाका हाकिमसाबहरुको मिटिङ सकेपछि खाना खाने तरखर गरे । कामदार कर्मचारीबाट शुरुमै कुनै तलबितल नपरोस् भनेर आफैले भान्छा कोठामा पुर्याए । कपडा फेर्न र हातमुख धुन आफैले पानी बोकेर सघाए । खाना आफैले पस्किदिए । त्यतिबेलासम्म हाकिमले केशवलाई अन्य कुराहरु केही सोधेनन् ।
खाना खाने क्रमसम्ममा हाकिम केही नबोलेपछि केशवले नै बोल्ने मौका मिलाए, “हजुरलाई के मन पर्थ्यो कुन्नि ? यहाँ त यस्तै पाइन्छ । सेवामा कुनै तलमाथि पर्‍यो कि ?”
“मलाई मेरो काममा बाधा नहाल्ने मान्छे मन पर्छ । कामदारहरुले गर्ने काम सबै आफै गर्ने होइन । उनीहरुले गर्न सकिहाल्छन् नि । मैले अह्राएको मान्नुपर्छ, वश् ।”
केशवले खानाको विषयमा सोधेको थियो तर पायो जवाफ घुमाउरो । के भनूँ के भनूँ मेशै पाएन केशवले । अनि भन्यो, “हामीहरुले त लाएअह्राएकै काम गर्ने त हो नि हजुर । नत्र हाकिम पद नै किन चाहियो र ?”
“ए… हाकिम आएको पनि मन परेन होइन त ? मैले बाटोमा भेटेदेखि तिम्रो व्यवहार र मनस्थितिको आँकलन गरिराखेको छु । तिम्रो मुख निलोकालो हुँदै गइराखेको पनि देखेको छु । जागिर खाने हो भने आफ्नो हैसियतमा बस्ने, वश् ।” हाकिमले चिल्ने सापकै जस्तै नजरले केशवलाई घुरे । केशवको सातोपुत्लो उड्यो । अनि हाकिमलाई चुठाइसकेपछि शयनकक्षसम्म पुर्‍यायो । ऊ फर्केर आएर आफ्नो कोठामा पस्यो र ऐना हेरेर झड्याम झड्याम आफ्नै गाला हिर्कायो । तँ शुरुमै बढी जान्ने हुनुपर्ने ? अब यसरी शुरुदेखि हाकिमको मन बाङ्गो हुँदै गए के हुन्छ ? हुन्छ के ? ऐनाको आफ्नै प्रतिरुपले गिज्यायो । के हुन्छ ? के हुन्छ, के हुन्छ !
केशवको अनुहार झनझन निन्याउरो हुँदै गयो । तीनचार दिनको धपेडीले र तीन चार रातको अनिदोले गर्दा यसै थकानले चूर थियो । हाकिमको कटाक्षले झनै उसलाई गलाउन थाल्यो ।
दिउँसो राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु, व्यापारीहरु सबैसंग मिटिङमा हाकिम व्यस्त रहे । केशवले मिटिङको सहजीकरण गर्ने काम गर्‍यो, केही बोलेन ।
बेलुका हाकिमसाबको शयन कक्षमा पुगेर क्षमा माग्न खोज्यो । तर हाकिमले ‘भोलि, पर्सि सुनौँला, आज मलाई धेरै नझिज्याऊ’ भनेकोले निराश भएर आफ्नो कोठामा फर्क्यो । आज पनि उसलाई निद्रा लाग्ने कुरै थिएन । हिम्मत हार्नुहुँदैन, एक दिन न एक दिन बुझाउनै पर्छ भन्ने दृढता लिइरह्यो ।
हाकिमले ‘तिमीले यी काम गर्नुहुँदैन’ भन्दाभन्दै पनि तीन दिनसम्म केशवले आफैले हाकिमको खुब रेखदेख गर्‍यो ।
चौथो दिनमा केशवलाई बोलाए हाकिमले । केशव खुशी हुँदै सफाइ पेश गर्न पाइनेभयो भन्दै पुग्यो हाकिमको शयनकक्षमा । हाकिमले छोटै निर्देशनमा फर्काइदिए केशवलाई, “एउटै अफिसमा दुईदुई जना किन बस्नू ? तपाईँको घर पनि खासै टाढा रहेनछ । घरबाटै आउने जाने गर्नुहोस् । त्यतिको लागि बोलाको हो ।”
हाकिम साब् म मेरो कुरा राख्न चाहन्छु ।
“म तिम्रो कुरा केही सुन्दिन बश् । जाऊ भनेपछि जानैपर्छ तिमीले । यो अफिस चलाउने तिमीले होइन मैले हो ।”
“हैन हाकिमसाब् । म मेरो घरमा अवश्य जान्छु । तर मैले यो विषयमा हजुरसंग कुरा गर्न खोजेको होइन । म सफाइ पेश गर्न चाहन्छु ।”
“चाहिन्न, चाहिन्न । तिम्रो कुनै सफाइ चाहिन्न मलाई । जाऊ अहिल्यै गैहाल ।” भन्दै केशवलाई धकेल्दै बाहिरसम्म पुर्‍याएर भित्रबाट ढ्याम्म ढोका लगाइहाले हाकिमले ।
जानैपरेपछि भोलिसम्म किन पर्खने आजै जान्छु भन्ने शुर कस्यो केशवले । अनि खाना पकाउने र चौकिदारी गर्ने कर्मचारीलाई ‘हाकिमको सेवामा कुनै तलबितल नपार्न’ सम्झाउँदै अँध्यारोमा एकझोला कपडा कोचेर मोटरसाइकलमा आफ्नो घरतर्फ हानियो ।
घरमा स्वास्नीले रातमा कपडा बोकेर आएको विषयमा केरकार गरिन्, “फेरि हाकिमसंग झगडा गर्यौ ? तिमी नामर्द ! तिम्रै हैसियतका अरुहरुको कत्रो सान छ, ठाउँठाउँमा महल ठड्याएका छन् । तिमीले आफूलाई त ठग्यौ, ठग्यौ, यी जहानबच्चाको पनि बिचल्लीमै पारेर छाड्ने भयौ” भनेर छेडछाड गरिन् । केशव प्रतिकार गर्ने मुडमा थिएन । अघिपछि भए आफ्नो मर्दपना देखाउन तम्सन्थ्यो । तर आज उसले त्यसो गरेन । सिरकभित्र गुटमुटिएर धोको पुग्ने गरी सिरकभित्रै रोइरह्यो । स्वास्नीले जति कर गरे पनि खान मानेन । त्यस रात पनि अनिदोमै काट्यो । तर बिहान हुँदा सम्झायो । हिम्मत हार्नुहुँदैन । एकदिन त कसो नबुझाइएला र ।
उसले त्यसदिनदेखि घरबाटै आउनजान थाल्यो । केशव घरबाट अफिसमा आउनजान थालेपछि हाकिमसाबको चर्पी बढी फोहोर हुन थाल्यो । कार्यालय परिसर अस्तव्यस्त देखिन थाल्यो । त्यसको दोष पनि कामदारलाई समेत उचालेको भनी केशवले बेहोर्नुपर्ने भयो । अफिस वरिपरि लगाइएको तरकारी चोरी हुनथाल्यो । त्यसको दोष पनि केशवलाई नै लगाइयो ।
तेस्रो दिनमा पहिल्यैदेखि चलाइआएको मोटरसाइकल पनि चलाउन नपाइने आदेश आयो । त्यो पनि सहर्ष स्वीकार्‍यो उसले । घर झण्डै एकघण्टा टाढा भएकोले कहिले हिँडेर त कहिले लोकल बसमा चढेर अफिस आउनजान थाल्यो ।
अर्को दिन हाकिमसाबले भने, “के हो, तिमीले त पूरानो हाकिमको पाउने तलब र सुविधा समेत रोकिदिएका छौ रे ? के दुश्मनी साँचिराखेका हुन्छौ हँ हाकिमहरुसंग तिमीले ?”
“हैन हजुर, त्यो कुरा त मलाई थाहै छैन । त्यो त लेखापाललाई थाहा होला । मरिजाऊँ, मलाई केही थाहा छैन ।”
“सब थाहा छ मलाई । चोखिन खोज्न लाज लाग्दैन ? तिमीलाई नयाँ हाकिमहरु आएको मन पर्दैन । तिम्रो बारेमा मैले अघिल्ला हाकिमहरुबाट धेरै सुनेको छु । तिमीलाई कसैले तह लगाउन सकेको छैन । हेर्दै जाऊ । लेखापाललाई भनेर भू.पू. हाकिमको तु. अहिल्यै चेक पठाइदेऊ र यहाँबाट निस्किहाल । अरु म केही सुन्न चाहँदिन ।”
अर्को दिन बोलाएर हाकिमले भने, “तिमी घरमा जहान छोराछोरी हुँदाहुदै महिला कर्मचारीसंग लहसिँदै हिड्छौ रे ? आइन्दा यस्ता कुरा फेरि सुनेँ भने तिमीलाई आचारसंहिताअनुसार कडा कारवाही हुन्छ ।” केशव केही पनि बोलेन, उसलाई लाग्योऽ जे बोल्यो हाकिमलाई ती शब्द बाइलो नै हुन्थे । अतः चुपचाप सफाइ पेश गर्ने मौका पर्खिराख्यो केशवले ।
अर्को दिन हाकिमले कार्यकक्षमा बोलाएरै भने, “तिमी अफिसमा गुटबन्दी गर्दै हिड्ने ? फटाहा, कामचोर बेइमान ! यो अफिसका कर्मचारीहरुले एकेकले मलाई टेर्न छाडे, यो सब तिमीले गर्दा नै हो भएको हो । पियनहरुले समेत टेर्दैनन् । आइन्दा पनि यस्तै गरे म पनि छाड्ने छैन । मैले तिमीजस्तालाई धेरै ठाउँमा तह लगाइसकेको छु । बुझ्यौ ?”
नभन्दै अफिसको वातावरण बिग्रँदै गइरहेको थियो । एक कर्मचारीले अर्कोलाई टेर्दैनथ्यो । अफिस अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेको थियो । तर यी सब केशवको कारणले भने भइरहेका थिएनन् भन्ने कुरा अरु कर्मचारीहरुलाई पनि खुलस्त थाहा थियो । तर यस बारेमा कोही पनि मुख बाउन सक्दैनथे वा चाहँदैनथे ।
अर्को दिन नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु आएर हाकिमसाबलाई सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउन झञ्झटिलो भइरहेको गुनासो गरे । विकासका कामहरु पनि छिटोछरितो हुन नसकेको आरोप लगाए । पत्रकारहरु समेत आएर कार्यालयको प्रगति विवरण माग्न थाले । हाकिमसाबले अफिसका गोप्य सूचनाहरु केशवले नै चुहाइरहेकोले अफिसमा नयाँ चुनौतिहरु सिर्जना भएको आशंका गरे ।
६ महिनापछि हाकिमको सरुवा हुने गाइँगुइँ हल्ला चल्न थाल्यो । एकातिर हाकिमलाई चित्तबुझ्दो सफाइ नै दिन नपाउँदै सरुवा भइदिए पछुतो भइरहने भयो भन्ठानी चिन्तित भयो केशव । अर्को मनले चित्त बुझायो काला गए सेता आउँछन् । अर्को हाकिमलाई त कसो रिझाउन नसकिएला र !
त्यसको दुईदिनपछि सुब्बा केशवबहादुरलाई उसकै नामको पत्र बुझाइयो ।
केशवले पत्रको ठेगाना हेर्‍यो आफ्नै अफिसको रहेछ । यो देखेर उसको मुटुको धड्कन एक्कासी बढेर आयो । उसले डराइ डराइ खाम च्यातेर पत्र हेर्यो ।
पत्रको बेहोरा थियोः
विषयः- सफाइ पेश गर्ने बारे ।
सुब्बा श्री केशवबहादुर
जिविसको कार्यालय ।
तपाईँ सुब्बा केशबबहादुर रावलले निसे ऐनको दफा ४१ देखि ५५ सम्मका आचारसंहिताहरुको बारम्बार उल्लंघन गरेको र नियमावलीको नियम १०५(१)क बमोजिम कार्यालयका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरु अनधिकृत व्यक्तिलाई दिएको पाइयो । तसर्थ तपाईँलाई ऐनको दफा ६१ अनुसार सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त किन नगर्ने ? बर्खास्त गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए चित्तबुझ्दो कारणसहित २४ घण्टाभित्रै सफाइ पेश गर्नू । अन्यथा उक्त दफा ६१ अनुसार कारवाही भई जाने बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।
पत्रको बेहोरा पढिनसक्दै केशवलाई आफू बसेको जमिन भासिएझैँ भयो । वरिपरिको दृश्य फनफनी रिङ्नथाल्यो । लडुँलालडुँला भएकोले आफूलाई थाम्नै मुश्किल भयो । एकछिन दुवै हातले टाउको अड्याई जमिनमा टुक्रुक्क बस्यो । उसले आफूलाई सम्हाल्न कोशिस गर्‍यो ।
उसको लागि कुन सफाइको इरादामा आफूलाई सम्हाल्दै आएको थियो, कुन सफाइ पेश गर्नुपर्ने दिन आइपुगेका थिए ! उसको हातबाट विभिन्न प्रकारका अफिसियल पत्रहरु तयार हुन्थे । हाकिमहरुलाई समेत नियम कानून र प्रचलनका कुराहरु सिकाउँथ्यो उसले र जटिल समस्या आइपरे उसैले कानूनका जराजरा उधिनेर प्रमाणिक पत्रहरु तयार गरिदिन्थ्यो । तर यस्तो प्रकारको आफैले लिखित सफाइ पेश गर्ने औपचारिक व्यहोरा भने आजसम्म उसले जाने सुनेको थिएन ।
पत्र पाइसकेपछि केही लागिहाल्छ कि भनी केशव पुनः बिन्ति बिसाउन पुग्यो हाकिमकहाँ । हाकिमले उसको अनुहारतिर नै नहेरी पत्र काटिसकेकोले पत्रको लिखित जवाफको मात्र सुनुवाइ हुने, बोलीको सुनुवाइ कुनै हालतमा नहुने भनेर केशवको कुरा सुन्न इन्कार गरे । ऊ निराश भई फर्कियो ।
एक मनले त भन्यो आफ्नै ठाउँ हो, ठेगान लगाइदिन्छु, जे पर्ला पर्ला । बातले नमान्ने भूतलाई लातले धपाउनुपर्छ ।
अर्को मनले आफू अब सक्दो सहनशिल हुनुपर्ने प्रण सम्झियो । आफ्ना जहान केटाकेटीको भविष्य सोच्यो । आफूले जागिर खाने आउँदा १५ वर्षको लामो अवधिलाई सोच्यो । अनि नजिकै रहेको जगभरिको पानी रित्त्यायो ।
हैन, हैन, मैले यसो गर्नुहुँदैन । मैले कदापि यसो गर्नुहुँदैन । अब मैले लेख्नैपर्छ । लेख्नैपर्छ । तर के लेख्ने ? कसरी लेख्ने ? हातहरु कामे । मुटु हल्लियो । लेख्न त औपचारिक जवाफ लेख्न खोजेको हो, तर सकेन । उसको दिमागमा ऐन कानूनका दफाहरु सबै स्वाट्टै हराइसकेका थिए । अनि लेख्न पुग्यो यस्तो पत्रः
दशणाम जोडी प्रणाम ।
मातहत हामी सबै कर्मचारीहरुको एक मात्र रक्षक भएकोले हामीहरुले पुज्नु पर्ने व्यक्ति हो हजुर । तसर्थ मैले हजुरलाई अझै पनि पूजनीय नै मान्छु र कर्मचारीको जागिरी खाँदासम्म आफ्ना हाकिमलाई पूजनीय नै मान्नेछु । मैले जे जति गरेँ यही अफिसकै लागि गरेँ । मेरो दोष कतै केही पनि छैन भएको प्रमाणित भएमा सहुँला बुझाउँला । मेरो केही गल्ती छैन हजुर ।
मैले हजुरलाई रिझाउन धेरै प्रयास गरेँ तर सकिन । मैले हजुरजस्तो न नाम कमाउन सकेँ, न दाम कमाउन सकेँ । मेरो परिवार अझै बिचल्लीमै छ । हजुरले त सात जुनी सपारिसक्नुभो । मेरो यही एउटा जुनी हो । कृपया हातपाउ जोडी बिन्ति गर्छु, यही एउटा जिन्दगी पनि बिगारिदिनुभो भने मेरो आँशुको सराप लाग्ला मेरो जहान बच्चाको आँशुको सरापले पोल्ला । किनभने मेरो केही गल्ती छैन हजुर ।
मलाई लाग्छ हजुरको पनि कुनै गल्ती छैन । म पत्याउन्न एकदुई वर्षको लागि मात्र जागिर खान आउनेले मेरो जीवनभरिको इमान्दारिता र कर्तव्य निष्ठताको सबै प्रमाणहरु संकलन र विश्लेषण गर्नसक्ला अनि उसको गल्ती ठहर्ला । हजुरको दिलमा शंकाको बीउ रोप्ने काम त्यो देशी चश्माले गरिदिएको हो । हजुरको चश्माले जे देख्नुभो वास्तवमा चश्मा खोलेर हेर्ने हो भने म त्यस्तो मान्छे देखिँदैनथेँ हुँला । लामो समयसम्म यस अफिसमा बस्नु मेरो रहर होइन बाध्यता हो । अन्यत्र सरुवा भइसक्दा पनि म हिँड्दा पटकपटक अफिसको वातावरण बिग्रिएकोले मेरो सरुवा यहीँ थमौती हुन्छ त म के गरुँ ? केही मान्छेहरुलाई यो चित्त बुझ्दैन । जागिरीमा इमान्दार मानिसहरुलाई खनीखेदो गर्छन् सबैले । ती मान्छेहरुले नै हजुरको कान भरिदिए । यसरी भरिदिए कि मेरो सफाइ अट्ने हजुरको कर्णस्थलमा ठाउँ नै बाँकी रहेन । यसमा हजुरको र मेरो दुवैको गल्ती छैन हजुर ।
सफाइ त मैले हजुर आउनैको दिनमा पेश गर्न खोजेको हुँ । अँहँ, हजुरले कहिल्यै सुनिदिने आवश्यकता ठान्नुभएन । हजुरको कान भरिएपछि र हजुरका आँखा देशी चश्माले थुनिएपछि मैले मेरो असली रुप कसरी देखाऊँ ? पहिल्यै सफाइ मागेको भए सायद सफाइको व्यहोरा धेरै फरक हुन्थ्यो होला । कम्तीमा ऐन कानूनका दफाहरु त कोट्याउनुपर्दैनथ्यो । मेरो केही गल्ती छैन हजुर ।
मैले सफाइ पेश गरेर हजुरले सफाइ दिए पनि कुनै अर्थ देख्दिन म । हजुर सरुवा भएर गएपछि अर्को नयाँ हाकिमलाई पनि त्यही चश्मा लगाएर पठाइदिनुहुनेछ । अर्कोको सरुवा हुँदा फेरि यही अनावश्यक सफाइ पेश गर्ने मारमा पर्नेछु म । म यी चश्माका हेराइहरुबाट हार खाइसकेँ । जसले न्याय दिन सक्दैन, उसले दिन सक्ने बाँकी चिज भनेकै अन्याय हो । तसर्थ मैले त्यही पाएँ । हजुरहरुले त्यो चश्मा लाउन नछाड्ने, त्यस चश्माबाट न्याय देखिँदै देखिँदैन त म के गरुँ ? मेरो केही गल्ती छैन हजुर ।
हजुरको कारवाहीबाट म पुनरावेदनमा त जाउँला, तर त्यहाँ पनि मेरो पहुँच छैन । भन्छन्, त्यहाँ बस्नेहरुले झनै गाढा चश्मा लगाउँछन् रे । तस्बीरमा पनि मैले त्यस्तै देखेको छु ।
बरु मलाई कारवाही गरिहाल्नुभन्दा म राजिनामा दिन्छु हजुर । मेरो राजिनामा स्वीकार होस् । हजुरको जय जय होस् । हजुरको देशी चश्माको जय जय होस् ।
हजुरको सदा आज्ञाकारी
उही सुब्बा केशवबहादुर
उल्लिखित बेहोराको चिठ्ठी नदीरामले हाकिमलाई बुझायो ।
हाकिमसाबले चिठ्ठी खोलेर हेरे । पहिलो एक प्याराग्राफ र अन्तिमको एक प्याराग्राफ पढेपछि बाँकी पढ्ने धैर्यता रहेन उनीमा । चिठ्ठी कच्याककुचुक पारेर थुकेर डस्टबिनमा मिल्काइदिए । केशवका सफाइका हिक्काहरु धेरैबेरसम्म हाकिमसाबको छेउमै रहेको डस्टबिनभित्रै निशब्द हिक्लिक हिक्लिक गरिरहे ।
हाकिमले बलबहादुरलाई बोलाएर भनेः “ल दफा ६१ अनुसार सुब्बा केशवबहादुरलाई कारवाही अघि बढाउन टिप्पणी अहिल्यै उठाइहाल ।”
“हस् हजुर !” भन्दै बलबहादुरले निर्णयको लागि नेपाली कागजमा टिप्पणी कोर्न थाल्यो ।
सुब्बा केशवबहादुर भने इमान्दारितापूर्वक जिन्दगी गुजारेको आफ्नै अफिसको प्रतिक्षालयमा बसेर आफ्नी स्वास्नीलाई अविरल आँशुले कागज भिजाउँदै अर्को चिठ्ठी लेख्नथाल्यो ।
(कथावस्तु र पात्रहरु पूर्णतया काल्पनिक हुन् । कसैको जीवनसंग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ ।)
← श्रीमद्‌भगवद्‌गीता सारसंक्षेप नवौँ अध्याय
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता सारसंक्षेप दशौँ अध्याय →
यस वेवसाइटका विषयवस्तु Select Category अडियो (8) अनुत्तरित् प्रश्न (? ? ?) (1) अनुवाद (1) द जङ्गल बुक (1) उखानटुक्काहरु (10) उपन्यास (10) कथा (31) लघु कथा (5) कविता (81) गद्य कविता (34) छन्द कविता (15) पद्य कविता (15) मुक्तक/गजल (11) गीत (20) शब्द (17) गीता शब्दकोष (1) गीती नाटक (2) चिठीपत्र (3) तस्बिर आफै बोल्छ (3) दैनिक संक्षिप्त समाचार (1) धर्म (2) नीति तथा कानून (15) प्रवचन संग्रह (31) फर्म्याटहरु (1) भिडिअो (2) मननीय भनाइ (42) मनोरञ्जन (77) मुरली (1) मेरो बारेमा (4) सम्पर्क (1) लेख/आलेख (19) लेखा सम्वद्ध कानूनहरु (20) विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु (6) विविध (9) शब्दकोष (11) श्रीमद्‍भागवतगीता सार (18) संक्षिप्त रुप (10) संक्षिप्त रूप (3) संक्षिप्त रुप (1) समीक्षा (3) संस्मरण (34) रुकुम साहित्यिक नियात्रा-०७५ (8) स्वविकसित सफ्टवेयरहरु (15) स्वागतम् (1)
पछिल्ला ५ वटा अपडेट
August 30, 2019 Purna Oli 0
August 28, 2019 Purna Oli 0
August 15, 2019 Purna Oli 0
August 12, 2019 Purna Oli 0
Copyright © 2019 Purna Oli. All rights reserved.